अस्पतालको चक्कर लगाउँदा लगाउँदै मृत्यु भएकी लामालाई कोरोना पुष्टि - muktikhabar
मुक्तिखबर	काठमाण्डाैं	साउन २५, २०७७
वीरगन्ज । वीरगन्जका आधा दर्जन अस्पतालको चक्कर लगाउँदा पनि भर्ना नलिएपछि मृत्यु भएकी युवतीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । पर्सामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या २१ पुगेको छ ।
शुक्रबार राति आधा दर्जन अस्पताल चहार्दा उपचार नपाएर मृत्यु भएकी वीरगन्ज –२ छपकैयाकी २० वर्षीया विष्णु लामाको संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. मदनकुमार उपाध्यायले जनाए ।
प्रयोगशालाले आइतबार बिहान दिएको रिपोर्टमा लामाको पनि पीसीआर पोजिटिभ आएको अस्पतालका डा. उपाध्यायले जानकारी दिए । साउनमा मात्रै पर्सामा १७ जनाको मृत्यु भएको हो ।
शुक्रबार राति एक्कासि श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि परिवारले राति ११ बजे रिक्सामा राखेर उनलाई अस्पताल पुर्‍याएका थिए । दोस्रोपटकमा नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पतालले भर्ना गर्न तयार भए पनि रिक्साबाट स्ट्रेचरमा राख्ने बेलामै उनको मृत्यु भइसकेको थियो ।
मृत्युपछि शनिबार दिउँसो लामाको स्वाब संकलन गरी पीसीआर परिक्षणका लागि नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा पठाइएको थियो । नमुना परिक्षणका क्रममा उनको पोजेतिभ आएको हो ।
यता, छपकैयाको २० वर्षीया मृतक लामासहित पर्सामा थप ७५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । नारायणी अस्पतालको पीसीआर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा उनीहरुमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका ३१ जना, आफैं कोरोना जाँच गराएका १२ जना, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका दमकलका कर्मचारी २ जना, क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका ४ जना, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका ९ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
यसैगरी ज्वरो, रुघा, खोकीको लक्षण देखिएका ९ जना, पर्सागढी नगरपालिकाका ३ जना, नारायणी अस्पतालका कर्मचारी ३ जना र सर्लाहीका एक जनाको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो ।
२५ साउन २०७७, आइतवार १३:५५ बजे प्रकाशित